15 / 02 / 2019 16 / 02 / 2019 ဂရေဟမ် 2563 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, အဆိုပါ Loose အပေါ် 75934 Dilophosaurus, 75935 Baryonyx မျက်နှာချင်းဆိုင် - The Treasure Hunt, 75937 Triceratops သောင်းကျန်း, Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T-rex, Jurassic World, Lego, Lego Jurassic World
အသစ် Lego Jurassic World ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်လိမ့်မည်ဟုအစုံကြေညာခဲ့သည်။
ရှေ့တွင်နယူးယောက်ကစားပွဲပြပွဲ 2019၊ Lego အုပ်စုလေးခုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် အသစ်အစုံ သောဖွင့်ပါလိမ့်မယ် Lego Jurassic World ဒီထုတ်ကုန်သို့ချည်နှောင်ပါလိမ့်မယ် 2019. အတွက်ဆောင်ပုဒ် ထို့အပြင်ကြေညာခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုကာတွန်းစီးရီး, Lego Jurassic World: Isla Nublar ၏ဒဏ္Legာရီပုံပြင်များ။
လေး အသစ်အစုံ ဇွန် ၁ ရက်တွင်စတင်မည်
အဆိုပါ Loose အပေါ် 75934 Dilophosaurus
168 ကိုအပိုင်းပိုင်း, $ 19.99 / £ 19.99
Owen Grady ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် Jurassic World ဒိုင်နိုဆောကိုချစ်မြတ်နိုးသောကလေး Hudson Harper ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဤဒိုင်နိုဆောသည်ငယ်ရွယ်သော Dilophosaurus ကိုစောင့်ကြည့်မည့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတည်ဆောက်သည်။
434 ကိုအပိုင်းပိုင်း, $ 59.99 / £ 54.99
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအမည်များသောလူဆိုး Danny Nedermeyer နှင့် Sinjin Prescott တို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောဘဏ္huntာကိုရှာဖွေကြသည် Jurassic World။ Owen နှင့် Claire တို့သည် Baryonyx မတိုင်မီနောက်တွဲယာဉ်တွင်ပုန်းအောင်းနေသည့်နှစ်လုံးကိုရှာဖွေရန်လမ်းကြမ်း၌ပြေးနေကြရသည်။
75937? Triceratops Rampage
447 ကိုအပိုင်းပိုင်း, $ 59.99 / £ 59.99
အဘို့အစီးတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ Jurassic World Egg Spinner နှင့်အတူ Simon Masrani နှင့် Allison Miles အသေးစားဓာတ်ပုံများပါရှိသည်။ Triceratops များသည်ခြံစည်းရိုးကိုဖြတ်ကျော်။ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသော်လည်းအခြေအနေများမှာမကောင်းမွန်လှပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Owen အပေါ်အန္တရာယ်သို့စီးနင်းဖို့ယုန်ကလေးနှင့်အတူလည်းပါဝင်သည်။
Dino-Mech တိုက်ပွဲ vs 75938 T-rex
716 ကိုအပိုင်းပိုင်း, $ 89.99 / £ 79.99
သူ့ကို Isla Nublar မီးတောင်၌ဝှက်ထားသောဘဏ္treာကိုခိုးယူရန် Dino-Mech ကိုတည်ဆောက်ပေးသောဒီ set တွင်ကောင်းသောအရာမှတက်ရန် Danny Nedermeyer ကိုကူညီပါ။ Owen Grady, Claire Dearing, Vic Hoskins နှင့် Blue Velociraptors Blue, Delta, Echo နှင့် Charlie တို့သည် T-rex နှင့်အတူပါဝင်သည်။
"Jurassic World ရုံအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောသူတို့အားဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုဖြစ်သည် Lego လိုင်စင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Jill Wilfert ကပြောကြားခဲ့သည် Lego အုပ်စု။ “ အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်ပုံပြင်များသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးဤအကြောင်းအရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ထူးခြားသောလှည့်ကွက်တစ်ခုကိုဖြည့်စွက်သည်။ Lego တစ်ခုအမြဲစိမ်းပိုင်ဆိုင်မှုမှတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဟာသ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို p တိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ ၀ မ်းသာပါတယ်artပိုပြီးမူရင်းမိတ်ဆက်ပေးရန် Universal နှင့်အတူ nership Lego Jurassic World စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးဆက်လက်ကစားနိုင်မည့်ပုံပြင်များ။ ”
← Lego Jurassic World: Isla Nublar ၏ Legend ကြေငြာခဲ့သည်
Lego Star Wars Triple Force သောကြာနေ့ကိုကြေညာခဲ့သည် →